Fumana eyona midlalo idumileyo xa udikiwe ▷ ➡️ Abalandeli ers ➡️
Fumanisa eyona midlalo ithandwayo xa unesithukuthezi
Juni 24, 2019 0 IiCententarios 560
Ngaba ujonge imidlalo yokonwabisa kwaye ungafumani nto? Sukuba nexhala! Kwisithuba esilandelayo ndiza kukunika isisombululo osifunayo ngolona qokelelo lubalaseleyo imidlalo xa enye inesithukuthezi.
Kukho iintlobo ngeentlobo ezahlukeneyo zazo, kwaye ezinye zinokuthi Sincede sisebenzise iingqondo zethu kwaye sihlale sisebenza.
Kananjalo, banokuba ngamahlakani ethu ukonwabisa abahlobo kunye nosapho ezintlanganisweni. Eyona nto ibalulekileyo kukwazi Khetha okona kulungileyo kwimeko nganye. Ngaba unoyolo ukudibana nabo?
Imidlalo yeselula okanye iThebhulethi
Imidlalo yeselfowuni okanye yeThebhulethi yenye yezona ndlela zintle, njengoko sinethuba lokuba nazo ziyafumaneka nangaliphi na ixesha:
Yeyona mvanje umdlalo webhola yenamba ifikile i-Android kule 2019. Umdlalo uqala ngo-Trunks ngokubeka ixesha lakhe kumatshini kwindalo iphela.
Kule nguqulo, amaxesha e-Dragon Ball athungelwe kwaye angena kwezona ntlobo ziphambili. Ukonwabisa umdlalo ubandakanya zama ukusombulula olu hlaselo ngokukhetha umlinganiswa owuthandayo.
Okona kulungileyo Umdlalo ukuphuma kwesithukuthezi, isekwe ekudibaniseni nasekutshintsheni iipipi. Kuya kufuneka uhambe ngamanqanaba amaninzi aya kuba nzima, ukudibanisa eyona nto iphambili.
ICandy Crush yenye yezi imidlalo ethandwa kakhulu kwihlabathi Kwaye iphawuleka ngokuba ngumlutha, ngaphandle kwamathandabuzo, ukhetho olufanelekileyo kuwe.
Ngenye ye I-Classics ezingaze ziphume kwisitayile, ukuguquguquka kwayo iphazili. Kulomdlalo iziqwenga ze-tetris ziya kuwa kwixande eliphambili, apho kuya kufuneka uzilungele.
I ngcamango yenza umgca othe tye othe tyaba, ukuba ngokuzenzekelayo inyamalale kwaye yongeza amanqaku. Qho xa ufumana amanqaku, uya kuhambela phambili ukuya kumanqanaba ahlukeneyo.
Njengoko unyuka, isantya sokuhla siya kunyuka kwaye oku kuya kufuna uxinzelelo ngakumbi. I-Adrenaline yenyuka xa iya ngokukhawuleza kwaye iindleko zokulawula utshintshoNgokuqinisekileyo uya konwaba nge-tetris.
Luhlobo lwesilo-qabane esibonakalayo kwimeko ethile usetyenziso lweselfowuni, Apho kukho iinguqulelo ezininzi. Ezi zilwanyana zasekhaya zilingisa ngathi ukuba nesilwanyana sasekhaya kwaye kwangaxeshanye ziyanceda ukuphelisa isithukuthezi.
Uninzi lwezicelo zezilwanyana zasekhaya ziqulathe iintlobo ezahlukeneyo zemidlalo Bayakuvumela ukonwaba ngakumbi ngesilwanyana sakho. Kuya kufuneka ubacoceke, ubondle, ubathole, ubanike uthando kwaye udlale nabo.
Kwivenkile yefowuni ephathekayo unokufumana iintlobo zayo ezintle kwaye Khetha ezona zinto zichaphazela wena.
Ngubani ofuna ukuba sisigidi
Lo mdlalo usekwe kwinkqubo yeTV esisasazwa ngamakhulu amazwe. Ngenxa yokuthandwa kwayo, a Uhlobo lwedijithali ukuyonwabela ngokuthuthuzelwa likhaya okanye ezintlanganisweni nabahlobo.
Isikrini sibonisa umbuzo ngeempendulo zakho ezine ezinokubakho, apho inye kuphela ichanekileyo. Ngalo lonke ixesha uyifumana ichanekile, imibuzo iya kuba nzima ngakumbi.
Uya kuba namakhadi asendle e-3. Abaphulaphuli aba, I-50 kunye ne-50 ikhadi lasendle, kwaye ubize umhlobo, njengakwinkqubo.
Olona khetho lubalaseleyo kwaye lunokusetyenziselwa iintlanganiso zamaqela ukuba namaxesha okonwaba nabahlobo.
Lo ngumdlalo wazo zonke izizukulwana, owasikhulula kwisithukuthezi kwaye vuselela ubukrelekrele bethu kunye noxinzelelo. Ngaphambili, iboniswe kuphela kwimidlalo yebhodi enamaqhekeza amaninzi, nangona kunjalo, iichips zihlala zilahleka.
Okwangoku, sifumana iinguqulelo zedijithali, ezinje ngokusetyenziswa kweefowuni eziphathwayo kunye neetafile. Le nguqulo ebonakalayo iyasivumela thatha kuzo zonke iindawo, dlala nangaliphi na ixesha kwaye uyonwabise ngohambo olude noludinisayo.
Lo mdlalo kakhulu ukonwabisa kunye nokuphumla, Ngumdlalo weqhinga oye waphumelela kakhulu. Iqulathe ukuba nebhokisi enamaqunube anemibala apho uya kuba nesiqhushumbisi sayo nayiphi na imibala.
Umdlali kufuneka yenza ukuba impompo ifikelele apho ikhoyo zombala ofanayo ukuze zixhaphaze kunye. Ingcinga kukuba ubadilize bade bagqibe.
Ngalo lonke ixesha uphakamisa ubunzima buye bunyuke. NgeBubble Bhalobhasha uya kuba nokuzonwabisa kakhulu kwaye Akusayi kubakho xesha lokudinwa.
Imidlalo yeBhodi nayo ilunge kakhulu ukuphela kwexesha Kuya kufuneka ubale kuphela abanye abadlali.
Yiyo umdlalo omnandi wamakhadi e-112 yemibala. Ezi zahlulwe ngemibala ye-4, luhlaza, bomvu, luhlaza okomthubi kwaye nganye yazo inexabiso lamanani ukusuka kwi-0 ukuya kwi-9.
Iziqulatho ze dibanisa amakhadi ngexabiso okanye umbala, Kukho amakhadi akhethekileyo anamakhadi asendle avuselela umdlalo.
Ungayidlala nge-2 kubantu be-9 kwaye Jonga ukuba ngubani ogqibezela iileta zabo ngaphambili. Uya kuba nemodeli yeklasi elandela imigaqo yomdlalo okanye wenze umdlalo ngokwezifiso zakho.
I-monopoly (umdlalo webhodi)
Kuyonwabisa Umdlalo ngokusekwe kutshintshiselwano kunye nokuthengwa kunye nentengiso yearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba. Inokwakha ikhethelo lokurhweba ngelokuzama ukuba umdlali angabanikazi beepropathi zezindlu nomhlaba ezibonakala kumdlalo.
Abadlali hambisa iichips zazo ngokutshintshana Ukuhamba kwewashi ejikeleze ibhodi, ngokusekwe kumanqaku edayisi.
Ngumdlalo osinika ukonwabisa iiyure ezininzi, umdlalo Inokuhlala ngaphezulu kweeyure ze-4. Kufanelekile ukonwaba nabahlobo kunye nosapho, qiniseka ukuba isithukuthezi asiyi kuba ngumhambisi wentlanganiso yakho.
Yiyo umdlalo wekhadi Iya kuvavanya amandla akho ememori. Ikhadi ngalinye liphindwe kabini kwaye kufuneka libekwe kakuhle lixutywe ukuze ucwangciso lwalo lube lolungahambelani.
Ukuqala umdlalo wenkumbulo, kuya kufuneka ube nomnye umntu okanye nangaphezulu udibanise amakhadi. Umxholo weeleta unokwahluka, ukusuka kwimifanekiso, imibala okanye amanani, into ebalulekileyo kukuba ezimbini kuzo.
Icebo ke beka yonke ingqwalaselo yakho kwaye ukhumbule ukuba kukho umntu ophakamise elinye iqabane lamakhadi ukuba uphakamisile
Lowo ulawula ukuqokelela amakhadi amabini alinganayo wongeza inqaku, xa liphelile, nabani na ophumeleleyo uphumelele.
Umdlalo webhodi odibanisa usapho kunye nabahlobo babonelele ngokuzonwabisa kunye ne-adrenaline eninzi. Inezinto a ibhodi enebhokisi ze4 yemibala eyahlukeneyo kunye neetshipi ze4 zombala ohambelana nebhokisi kunye nedayisi.
Iitshiphu ziya kuqala ngokwenani eliphuma kwidayisi. Ziya kujikeleza iibhokisi kwaye zibuyele kumbala ohambelana nombindi webhodi.
I-adrenaline iphakama xa iicups ezimbini ziwela kwibhokisi enye, eyokugqibela efikayo ibuyisela enye ukuphuma. Nabani na oza neetshipsi zabo ze-4 kwi-winies yeziko.
UDomino ngumdlalo odumileyo nowonwabisayo oquka Iithayile zexandexande ze24, ngokubanzi imhlophe. Ezi zinokwahlulahlula kwisiqingatha, nganye iya kuba nenqaku lamanqaku ahamba ukusuka kwi-zero ukuya kwi-6.
Ngumdlalo weqhinga oquka nabani na one-6 ephindwe kabini uphuma kuqala. Emva koko omnye umdlali uya kubeka enye ene-6 kunye nokunye de omnye wabadlali aphelelwe zi chip.
Kufanele ukuba njalo Sebenzisa eyona ndlela ibalaseleyo yokubeka ii-chip ezichanekileyo ngexesha elililo
Ngumdlalo webhodi esekwe Ukwakhiwa kwamagama. Inebhodi enamanani ezibhokisini kwaye iqulethe iithayile zesikwere ezili-100 ngonobumba omnye.
Umdlali wokuqala kufuneka Yakha igama lokuqala kwaye abanye baya kwenza abanye koku. Kwiphepha kufuneka ubeke amagama abathathi-nxaxheba ukuzisa amanqaku afunyenweyo xa kusenziwa igama.
Amanqaku aya kuxhomekeka kwibhodi ebonisa ntoni. Ngumdlalo Ilungele ukuphela kwesithukuthezi ngendlela yemfundo. Unokudlala kunye nabathathi-nxaxheba be4.
Ngumdlalo wethuba osetyenziswa ngabantu abaninzi ukuphelisa isithukuthezi. Inamakhadi aliqela aneenombolo ezingahleliwe, apho ikhadi ngalinye lihlukile kunkqubela phambili. Kwakhona, ineibhola ezidwelisiweyo.
Umdlalo uqhubeka xa omnye wabathathi-nxaxheba ethatha inxaxheba thatha iibhola ezidwelisiweyo kwaye uxele amanani abo. Ukuba nawuphi na umdlali unenombolo ekhadini lakhe, kufuneka alunqumle ngaphandle de omnye wabadlali azalise ikhadi kwaye ophumelele. Lo mdlalo kufuneka udlalwe ngabathathi-nxaxheba abaliqela.
Kumaxesha amaninzi asinawo umdlalo webhodi, kungoko kufanelekile ukuyazi le midlalo yeqela:
Ngumdlalo apho kuphela udinga iphepha, ipensile kunye nengqondo. Inolwabiwo lokwahlula iphepha libe ziibhokisi ezinokhetho olwahlukeneyo lokuchonga ngoonobumba.
Umdlali Khetha unobumba kwaye ubeke amagama achonga ukhetho. Owokuqala ukugcwalisa zonke iibhokisi uthi igama liyekile.
Ibhokisi nganye inexabiso Amanqaku e-100 kwimpumelelo nganye ekhethekileyo, ukuba ilingana naleyo yomthathi-nxaxheba, amanqaku e-50 anikezelwa. Nabani na ofumana awona manqaku maninzi uwina.
Okokugqibela, ukwazi oku kukhethwa kwemidlalo awuyi kuba nexesha lokukucaphukisa. Zininzi iinketho ze imidlalo xa enye inesithukuthezi, ungalibali ukuba ubazi, baya kuba luncedo lweentlanganiso okanye amaxesha okonwabisa.
1 Imidlalo yeselula okanye iThebhulethi
1.2 Ikrashi yakhendi
1.4 Izilwanyana ezifuywayo
1.5 Ngubani ofuna ukuba sisigidi
1.6 Iphazili ebonakalayo
1.7 Bubble Shooter
2 Imidlalo yebhodi
2.2 I-monopoly (umdlalo webhodi)
3 Imidlalo yeqela
Yonwabela eyona midlalo ilungileyo xa uqhuba
Dibana nemidlalo efanelekileyo xa ungenayo i-intanethi